Ma jiraan dhawaaqyo cokedheer, Bombardier CL-415
Ma jiraan dhawaaqyo cokedheer, Bombardier CL-415 1 sano 5 bilood ka hor #1360
Waan soo degsaday oo aan ku rakibay Bombardier CL-145 Canadair Super Scooper. Wax walba waa hagaagsan yihiin ... marka laga reebo codadka isbeegaha! Markaan Diyaaradda ku dhex ridayaa p3d4.4 Waan helaa farriinta "E: \_P3D4 \_ Xariiqda \_ Codadka Cockpit ayaa maqan "Maxaan sameeyaa fadlan?
Ma jiraan dhawaaqyo cokedheer, Bombardier CL-415 1 sano 4 bilood ka hor #1367
Caawimaad kasta fadlan? Waxaa la dhajiyay toddobo maalmood kahor,